Uyenza njani ioli yeendevu? | Amadoda aQinisekileyo
Uyenza njani ioli yeendevu?
UFausto Ramirez | | Ukunyamekela
Ngaphambi kokuqala, kuyacetyiswa ukuba zibulale iintsholongwane kwizixhobo ezinokusetyenziswa ngotywala. Emva koko ihlanjululwa ngamanzi ashushu kwaye ivumeleke ukuba yome. Emva koko isitya sithathwa kwaye i-argan yeoyile ithululelwa ukunika ukukhanya kunye nokuthamba kwi iindevu. Ke ioyile yeavokhado iyongezwa kwaye ioyile yejojoba eyondla iindevu, ikhusele kwaye ihambisa amanzi.
Nje ukuba kwenziwe oku, amathontsi amabini e vitamin EUngasathethi ke ngamathontsi ambalwa e-ylang ylang i-oyile ebalulekileyo, enika iindevu isiqhumiso esikhethekileyo, kodwa iyenze yomelele kwaye ikhanye Emva koko izithako zixutywe ne-spatula de kube kufunyanwa ukungqinelana okufanayo.
Ngoncedo lwefaneli ioli yeendevu kwibhotile yokutshiza. Emva koko igcinwa kwindawo eyomileyo, kude nobushushu nokukhanya. Ukuba igcinwe kakuhle, i-oli yeendevu ingasetyenziselwa iinyanga ezi-6. Ukwenza ioyile yeendevu, inokudityaniswa neoyile yeavokhado, kunye nejusi yealoe vera okanye kunye ibhatha yeshea. Ezinye iifomula zixuba ioyile yealmond entle kunye neoyile yeArgan. Kulabo bafuna ukukhulisa iindevu, ukusetyenziswa kweoyile ye-castor kunokwenzeka.
Kule oli kuyongezwa Ioli yeSesame kunye ne-anti-hair loss and regenerating formula ifunyenwe. Ukuchukumisa ioyile ebalulekileyo oyikhethileyo kuya kuba kuhle ukuba uqhumise wonke umxube. Eyona fomyula ixabisekileyo kukuxuba iioyile ezifanelekileyo zevetiver, iidiliya kunye nemisedare.
Nje ukuba ioli yeendevu, encinci iyasetyenziswa kwesi siqalo ngengcambu. Emva koko iyakanywa ngezandla ukuze ioyile ingene kakuhle. Ukufumana iziphumo ezilungileyo, kuyacetyiswa ukufaka ioyile ezindevini yonke imihla.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Uyenza njani ioli yeendevu?
Iingcebiso zokukhusela iinwele nolusu kwi-chlorine yedama
Uhlobo olulungileyo lweendevu zamadoda anobuso obude